Ụmụ klas | January 2020
Ihichapu kaadị n'ime Odnoklassniki
Ndị so na Odnoklassniki netwọk mmekọrịta na-enwetakarị ego ego a na-emepụta nke ego - nke a na - akpọ OKi, nke ha na - ejikọta ọrụ dị iche iche, statuses na ọrụ maka profaịlụ ha, nye onyinye nye ndị ọrụ ndị ọzọ. Otu n'ime ụzọ ịkwụ ụgwọ bụ plastic card.
Ihichapụ ndị enyi Odnoklassniki
Ndị enyi - nke a bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke àgwà nke onye ọ bụla na ngalaba na ezinụlọ na otu. Ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mgbagwoju anya na mgbagwoju anya, anyị na-enwe ọmịiko na enweghị mmasị n'ebe ndị ọzọ nọ. Ma, n'ezie, iwu ọha na eze na-egosipụta na mpaghara dịka netwọk mmekọrịta na Ịntanetị. Anyị na-eme enyi na Odnoklassniki, na-ezipụ ozi, na-aza ajụjụ na foto na akụkọ, na-ekwurịta okwu na otu mmasị dị iche iche.
Nbanye na peeji Odnoklassniki gị
Ọtụtụ nde mmadụ nwere akwụkwọ nke ha na netwọk mmekọrịta netwọk Odnoklassniki, na-ekwurịta okwu na ndị enyi, ndị ikwu na ndị maara, ozi mgbasa ozi, na-ekele ibe ha na ezumike na ememe, biputere foto na vidiyo. Ọnụnọ nke akaụntụ ahụ na-enye ohere zuru oke maka nkwurịta okwu maka onye ọ bụla so na akụ.
Ihe ndetu a na-ekwu na adị na netwọk Odnoklassniki ka onye ọ bụla nke ọrụ a nwere ike ịzipụ foto, vidiyo, mgbasa ozi vidiyo, ngwa ngwa, na mgbasa ozi ọ bụla na mgbasa ozi. Ozi a ga-ahụ ozugbo ndị enyi gị niile ma nwee ike ikwurịta ma kwue ya.
Anyị na-akwapu ngwa ahụ na "Ndị Enyi" na Odnoklassniki
Na netwọk mmekọrịta ọ bụla, ị nwere ike itinye ma ndị enyi ochie gị na ndị nwere mmasị na ndị enyi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị zitere mmadụ n'ekpere, ma ọ bụ naanị gbanwee obi gị banyere ịgbakwunye onye ọrụ, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkagbu ya n'echeghị ka ọ bụrụ onye a nabata ma ọ bụ jụ n'akụkụ ahụ.
Kedu ihe na-emegheghị ụmụ klas gị
Ndị klas gị bụ otu n'ime netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu na mpaghara Russia nke Intanet. Ma, n'agbanyeghị na ama ewu ewu ya, saịtị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ ma ọlị. E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Isi ihe mere ụmụ klas gị anaghị emeghe Malfunctions, n'ihi na enweghị ike ibudata saịtị ahụ n'ụzọ zuru oke ma ọ bụ kpamkpam, na-abụkarị n'akụkụ onye ọrụ ahụ.
Ozi mgbasa ozi dị na ibe nke onye ọrụ ọ bụla na mpaghara ọ bụla nke netwọk mmekọrịta Odnoklassniki. Ọ na-egosiputa ihe ọmụma zuru ezu banyere ihe niile merenụ na nnukwu ọganihu nke akụ. Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ nwere ike ọ gaghị amasị na enwere ọtụtụ ngosi na-enweghị isi ma na-enweghị mmasị na teepu ahụ.
Imepe profaịlụ mechiri emepe na Odnoklassniki
Ọtụtụ ndị ọrụ nke netwọk Odnoklassniki na-eji ọrụ "Profaịlụ Nanị" akwụ ụgwọ. Mgbe megharịrị profaịlụ mechiri emechi, ozi niile gbasara gị dị naanị ndị enyi gị na akụ, nke na-enye gị ohere iji chebe onwe gị pụọ na ndị na-ewe iwe na ndị na-erughị eru. Na otu esi emepe profaịlụ na Odnoklassniki, ma ọ bụrụ na nke a bụ mkpa dị ngwa?
Otu esi ele Odnoklassniki paswọọdụ
Ncheta nke mmadu abughi nke zuru okè ma ya mere, o bu ihe kwere omume na onye ogha chefuru okwuntughe iji nweta akuko ya na netiti netiti netiti Odnoklassniki. Kedu ihe a ga-eme na nghọtahie dị otú ahụ na-ewe iwe? Isi ihe ị ga-eji nọrọ jụụ ma ghara ịtụ ụjọ. Na-eleba anya na Odnoklassniki paswọọdụ Ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala ugboro ugboro chebere paswọọdụ gị mgbe ị na-abanye n'ime akaụntụ Odnoklassniki gị, ị nwere ike ịnwa ịchọta ma hụ okwu ederede na ihe nchọgharị ị na-eji.
Ịkwụsị ọrụ "All inclusive" na Odnoklassniki
Ndị nkịtị niile na-enwe mmasị ịnata onyinye. O nweghị ihe na-enye obi ụtọ inye ha ndị ọzọ. Na nke a, cyberspace adịghị nnọọ iche ná ndụ kwa ụbọchị. Ndị mmepe nke netwọk mmekọrịta Odnoklassniki na-enye ndị ọrụ ha ụgwọ ọrụ kwa ọnwa na ọrụ "All Inclusive", nke na-enye ohere inye onyinye dị iche iche nye ndị enyi na ndị maara na akụ.
Na-achọ peeji nke gị na Odnoklassniki
Ị nwere ike ịchọta peeji nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla Odnoklassniki ọrụ, na-eji ma ọ bụ ndị ọzọ search engines (Yandex, Google, wdg), na na netwọk mmekọrịta site na iji nyocha n'ime. Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na ụfọdụ akaụntụ njirimara (gụnyere nke gị) nwere ike zonahụ na ịdebanye aha site na ntọala nzuzo.
Download foto site Odnoklassniki ka kọmputa
Onye ọrụ ọ bụla nke Odnoklassniki netwọk mmekọrịta nwere ike ọ bụghị naanị ibudata foto, kamakwa ibudata ha. N'agbanyeghị eziokwu na saịtị ahụ enweghị arụ ọrụ maka ịchekwa foto gaa na PC ma ọ bụ laptọọpụ, a na-arụrịrịrịrị ọrụ a n'ime ihe nchọgharị ahụ site na ndabara. Banyere ohere ibudata site na Odnoklassniki Na saịtị ahụ adịghị enye ndị ọrụ ya ọrụ dịka nbudata ọdịnaya ma ọ bụ ndị ọzọ (egwu, vidiyo, foto, mmegharị) na kọmputa ha, ma ọ dị mma, taa, e nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ka njedebe a kwụsị.
Chọọnụ onye na-enweghị aha na Odnoklassniki
Ọ bụghị onye ọ bụla n'ime anyị bụ otu n'ime ndị na-ahụkarị netwọk mmekọrịta ọha na eze, ụfọdụ n'ime ha achọghị ịdebanye aha na nke ọ bụla n'ime ha, ụfọdụ na-amachibido iwu. Ọ ga - ekwe omume maka onye ọrụ nke na - enweghị ndekọ na Odnoklassniki iji chọta onye ọrụ ọzọ n'ebe ahụ? Ee, ọ ga-ekwe omume.
Izipu vidiyo na ozi Odnoklassniki
Ọtụtụ n'ime anyị na-enwe mmasị na ndị enyi na ndị enyi na netwọk mmekọrịta. Ma mgbe ụfọdụ, ozi ederede dị mfe adịghị enwe ike ịtụgharị uche zuru ezu na ihe niile na ịchọrọ ịchọrọ onye na-ahụ maka ya. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị nwere ike itinye ozi gị ọ bụla faịlụ vidiyo, ya mere iji kwuo okwu, maka ihe doro anya.
Mee ka ederede ederede Odnoklassniki
Ụdị ụdị ngbanwe nke Odnoklassniki nwere ike ịbụ obere, nke ga-eme ka mmekọrịta na ọrụ ahụ dịkwuo mkpa. Ọ dabara na, e nwere ọtụtụ ụzọ iji nyere aka mee ka ụdị ahụ dị na peeji ahụ. Akụkụ nke font na OK Site na ndabara Odnoklassniki bụ ederede nke kachasị maka ọtụtụ ndị nyocha na oge a.
Anyị na-eziga kaadị na Odnoklassniki
Kaadị ndị dị na Odnoklassniki yiri onyinye, ma e wezụga na ụfọdụ n'ime ha agaghị egosi onye ọrụ na ngọngọ na onyinye ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ akwụkwọ ezigara na netwọk mmekọrịta site na ndabara dị oke ọnụ ma nwee ọdịnaya media (egwu na mmegharị). Banyere kaadị na Odnoklassniki Na netwọk mmekọrịta a, ị nwere ike izipu kaadị na onye mmadụ na ozi nzuzo (ọ dịghị mkpa ka ewepụ ya na Odnoklassniki) ma ọ bụ dị ka "Onyinye" nke a ga-etinye ya na ibe ya na ibe.
Anyị na-agagharị na "ndepụta ojii" na Odnoklassniki
Ọ bụrụ na mmadụ achọtara na ọ dị mkpa iji zipu gị gaa na "Black List" (PC), nke a pụtara na ị gaghị enwe ike ịga leta ya, dee ya ozi, lee mmelite nke "Ribbon". Ọ dabara na, enwere ohere iji zere mkpọchi dị otú ahụ. Na-agafe ọnọdụ mberede na Odnoklassniki n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na a kpọbatara gị na mberede, ị nweghị ike isi na ya pụta ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ị ga-esi zere ihe mgbochiri ya n'enweghị nkwenye nke onye kpọpụtara gị n'ebe ahụ.
Ịhazi ụmụ klas
Ị ghọọ onye nwe ụlọ mpako nke aka gị na netwọk netwọk Odnoklassniki na amaghị ebe ị ga-amalite? Nke mbụ, ịkwesịrị ịhazi akaụntụ gị dịka mkpa gị na mmasị onwe gị. Mee ka onye ọrụ novice ọ bụla dị mfe ma nwee ike.
Anyị na-enweta OKi na saịtị Odnoklassniki
Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na netwọk ọ bụla nwere ego nke ya, nke ị nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ ndị na-adịghị na ndị ọrụ ndị ọzọ nke saịtị ahụ. N'ebe a na Odnoklassniki e nwere ego dị otú ahụ nke na-enye gị ohere imeghe ọrụ ndị ọzọ nke saịtị, dịka ọmụmaatụ, ụdị "anaghị ahụ anya" ma ọ bụ akara "5+" ruo oge.
Onyinye onyinye maka avatar gị na OK
O doro anya na onye ọrụ ọ bụla nke netwọk mmekọrịta Odnoklassniki hụrụ mgbe ndị enyi na-ezigara ya onyinye ma jiri mma mara mma, nke na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ mma na avatar onye ọrụ. Ma, obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ọbụna ihe na-atọ ụtọ karị iji mee ka ndị enyi gị nwee onyinye maka ezumike ma ọ bụ dị ka nke ahụ. Na oru Odnoklassniki, enwere ugwo ugwo maka uzo - ihe a na-akpọ OKI, site na ịzụta nke ego ego anyi nwere ike iji di iche iche di iche iche, gụnyere iziputa onyinye.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụmụ klas 2020